Warshada bireedka naxaasta ee korontada | Shiinaha -saareyaasha bireed Copper Electrolytic Copper, Alaab -qeybiyeyaasha
Qalabka biraha ee elektrolytigga ah ee gaashaan ee ay soo saartay CIVEN METAL wuxuu si wax ku ool ah u ilaalin karaa calaamadaha korantada iyo faragelinta microwave sababta oo ah daahirnimada sare ee naxaasta.
Qalabka biraha ee elektrolytigga ah ee uu soo saaray CIVEN METAL wuxuu leeyahay iska caabin aad u fiican heerkulka sare iyo ductility sare. Biraha naxaasku ma qayilo mana beddesho midabka marka heerkulkiisu sarreeyo, iyo ductility -kiisu wanaagsan wuxuu sahlayaa in lagu xardho agabyo kale.
ED Coils Foils for Li-ion Battery (Laba-dhalaalaya)
Qalabka biraha ee elektrolytigga ah ee baytariyada lithium waa bireed naxaas ah oo ay soo saartay oo ay soo saartay CIVEN METAL gaar ahaan warshadaha soosaarka baytariyada lithium.
VLP ED Foils Copper
Foil -ka naxaasta ah ee elektrolytka ah ee aadka u hooseeya ee ay soo saartay CIVEN METAL wuxuu leeyahay astaamaha cufnaanta hoose iyo xoogga diirka sare. Biraha naxaasta ah ee ay soo saartay habka elektrolysisku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka daahirsanaanta sare, nijaasta hoose, dusha siman, qaabka looxa fidsan, iyo ballaca weyn.
Fiilada naxaasta ee elektrolytigga ah ee FPC waxaa si gaar ah loo soo saaray loona soo saaray warshadaha FPC (FCCL). Xaashidan naxaasta ah ee elektrolytigga ah waxay leedahay ductility ka fiican, qallafsanaanta hoose iyo xoogga diirka oo ka fiican kuwa biraha kale ee naxaasta ah.
ED Coils Foils for Li-ion Battery (Laba-matte)
Foornada korantada ee korontada loogu talagalay batteriga lithium ee hal dhinac ah (labalaab ah) waa qalab xirfadeed oo ay soo saartay CIVEN METAL si loo hagaajiyo waxqabadka daboolka korantada xun ee batteriga. Xarkaha naxaasku wuxuu leeyahay daahir aad u sarreeya, iyo ka dib marka uu qallafsanaado, way fududahay in la waafajiyo walxaha elektaroolka ee taban oo ay yar tahay inay dhacaan.
RTF ED Foil Copper
Dib -u -daweeynta bireedka naxaasta ee elektrolytigga ah (RTF) waa bireed naxaas ah oo lagu qallajiyay heerar kala duwan oo labada dhinac ah. Tani waxay xoojinaysaa xooga diirka ee labada dhinac ee biraha naxaasta ah, taasoo sahlaysa in loo isticmaalo lakab dhexe si loogu xidho agabyada kale.
Super Thick ED Coils Foils
Falalka naxaasta leh ee aadka u qaro weyn leh ee elektrolytka ah ee ay soo saartay CIVEN METAL ma aha oo kaliya mid la beddeli karo marka la eego dhumucda bireedka naxaasta, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay qaab-dhismeed hooseeya iyo xoog-soocid sare, oo dusha sare ma aha mid sahlan in budada laga soo dhaco. Waxaan sidoo kale bixin karnaa adeegga jarista iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.